सानो काम भन्दै हेयको दृष्टिले हेर्ने प्रवृती बन्द गरौं : राजन श्रेष्ठ - Gokarna News
सानो काम भन्दै हेयको दृष्टिले हेर्ने प्रवृती बन्द गरौं : राजन श्रेष्ठ
मङ्गलबार, फागुन १४, २०७५ by Gokarna News
काठमाडौं नयाँ बानेश्वरमा जन्मेका राजन श्रेष्ठले भि एस निकेतन बाट पढाई सकि सामान्य क्याफे मार्फत व्यवसाय शुरु गरेका श्रेष्ठ अहिले आर एन बि रेस्टुरेन्टुका मालिक हुन । नयाँ वानेश्वर स्थित पिपल बोट नजिकै रहेको यस रेस्टुरेन्ट विशेष गरि स्वादिलो खाना र रात्री समयमा लाईभ म्युजिकको लागी परिचित छ । संचालक श्रेष्ठ संग रेस्टुरेन्ट र व्यवसायको बारेमा गोकर्ण न्युजका सुरज लकान्द्री ले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
आर एन बि रेस्टुरेन्टको शुरुवात कसरि गर्नुभयो ?
खासमा पहिला यो ठाउँमा इन्सिच्युट र साइबर संचालन थियो । अनि पछि ई लाइबेरिको कन्सेप्टमा सानो क्याफे संचालन गरेउ त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै यस रेष्टुरेण्टको अवस्थासम्म आइपुगेका छौं ,यस व्यसाय सुरु गरेको करिब ७ वर्ष जस्तो भयो ।
व्यवसाय संचालनमा परिवारको समर्थन पनि होला नि ?
परिवारको सहयोग नहुने कुरै भएन । मेरो पहिलो व्यवसायको आरम्भ नै परिवारकै सहयोगबाट भएको हो ।
यस रेष्टुरेन्टको ग्राहकलाई आकर्षक बनाउने कुरा के होला ?
पहिला त ग्राहकहरु प्रति गरिने आदरपुर्ण व्यवहार नै हो । त्यसपछि यहाँ खानाका स्वादहरु हुन स्वादमा विशेष गरि चाइनिज स्वादका खानाहरु हामी वितरण गछौ । साथै रात्री जीवनलाई रमणिय बनाउन लागि लाइभ म्युजिक को व्यवस्था पनि गरेका छौ ।
विभिन्न होटेल तथा रेस्टुरेन्टमा मर्यादापालक (बाउन्सर) राख्ने गरिएको छ । तपाईंले पनि राख्नुभएको त होला नि ?
हाम्रो यहाँ बाउन्सर नै राख्नु पर्ने अवस्था चाहिँ अहिले सम्म आएको छैन । किनभने त्यस्तै समस्या आइहाल्यो भने पनि हामीले बानेश्वर क्षेत्रको प्रहरी प्रशासनको सहयोग लिन्छौ । उहाँहरुले नै समस्यालाइ नियन्त्रणमा लिएर सामाधान गरिदिनु हुने भएकोले बाउन्सर नै राख्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन ।
प्रहरी प्रशासन प्रति कुनै खालको गुनासो छकी ?
प्रशासन प्रति सुरक्षाको तर्फबाट चाहि कुनै गुनासो छैन तर रात्री समय थप्ने कुरामा चाहि अलि कन्जुसाई गर्नु हुन्छ उहाँहरुले किनभने ठमेल क्षेत्रतिर २४ घण्टा रात्री समय छ तर यहाँ चाहिँ निर्धारित समय भन्दा एक दुई घण्टा बढी पनि रेस्टुरेन्ट संचालन गर्न प्रतिबन्धित छ । यस विषयमा चाहिँ प्रहरी प्रशासनले पनि हाम्रो कुरा बुझिदिए हुनेथियो जस्तो लाग्छ ।
रेस्टुरेन्टलाई लिएर भविष्यमा के सोचिराख्नु भएको छ ?
अब आउने दिनमा चाहिँ कसरी यसलाई अझ व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ र ग्राहकलाई दिने सुविधामा अझ कसरी विस्तार गर्न सकिन्छ, त्यस्तै खानामा अन्य नयाँ स्वादहरु थप्ने लगाएतका कुराहरुको बारेमा विचारमा गरिरहेको छु ।
युवाहरुलाई व्यवसाय क्षेत्रमा आउनको लागि कस्तो सुझाब दिन चाहानु हुन्छ ?
कुनै पनि व्यवसाय क्षेत्रमा हात हाल्दा धैर्य राख्न जरुरी छ । खासगरी नेपालमा कामलाई सानो र ठुलो भन्ने सोचले गर्दा नै धेरै युवाहरु विदेशिन बाध्य पनि छन । वास्तवमा यस्ता कुराहरुलाई वास्ता नगरि आफुले गर्न लागेको काममा विश्वास र धैर्य राख्ने हो भने एक न एक दिन सफलता अवश्य प्राप्त हुन्छ । कुनै पनि कामलाई हेयको दृष्टिले हेर्न बन्द गर्नु पर्छ ।
हामी नेपाली ग्लोबलले युरोपका ३ देशमा च्याप्टर गठन गर्दै